निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब पुर्‍याउन बीमा समितिले निर्देशन दिएको हो । सोहीअनुसार कम्पनीले पूँजीवृद्धिका लागि ६ लाख ५९ हजार ५ सय ६५ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो । एफपीओ जारी गरेपछि शेयरधनीलाई १३ दशमलव ५२ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरी कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५८ करोड ४० लाख पुगेको छ ।
अझै बीमा समितिले तोकेको चुक्तापूँजी पुगेको छैन । पूँजीवृद्धिका लागि कम्पनीले बोनस शेयर वितरण गर्ने हल्लाले शेयरमूल्य बढेको हो । केही दिनयता सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने उत्कृष्ट १० मा कम्पनीभित्र प्रिमियर इन्स्योरेन्स परेको छ । मंगलवार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. १ हजार १० मा खुला भएर अघिल्लो दिनको तुलनामा १० अंक बढ्दै रू. १ हजार २० पुगेको छ । १ कम्पनीको शेयरमूल्य १ वर्षको अवधिमा उच्च रू. १ हजार ४ सय र न्यून मूल्य रू. ७ सय १० छ ।
खरीद चाप : कम्पनीको मंगलवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम समयसम्म विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । सो अवधिसम्म ९ हजार ५ सय ४३ कित्ता शेयर खरीद र २ हजार ७४ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
2019-01-09 - 196 view(s) - abhiyan